पाकिस्तानी हवाई मार्ग भारतकाे लागि खुल्याे - Aarthiknews
शनिबार, ०४ माघ २०७६ Saturday, 18 January, 2020
पाकिस्तानी हवाई मार्ग भारतकाे लागि खुल्याे
काठमाडौं । पाकिस्तानले भारतका लागि हवाई क्षेत्र खुला गरेको छ । पाकिस्तानको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मंगलबारबाट हवाई क्षेत्र खुला गरेको जानकारी दिएको हो । बालाकोट आक्रमणपछि पाकिस्तानले भारतीय विमानका लागि हवाई मार्ग बन्द गरेको थियो । हवाई मार्ग खुला गरेर पाकिस्तानले भारतसँगको सम्बन्धमा मिठास भर्न खोजेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
पाकिस्तानको यो कदमले भारतको एयर इन्डियालाई ठूलो राहत मिलेको समाचारमा उल्लेख छ । किनभने पाकिस्तानको हवाई मार्ग बन्द भएपछि एयर इन्डिया अर्कै बाटो प्रयोग गर्न बाध्य थियो ।
भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार भारतीय एयरलाइन अपरेटरहरुले अब छिट्टै पाकिस्तानको हवाई क्षेत्र हुँदै सामान्य मार्ग प्रयोग गर्न थाल्ने छन् ।
पाकिस्तानको नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणले गएराति पौने १ बजेतिर एयरमेन -नोटाम)लाई एक सूचना पठाएर पाकिस्तानको हवाई क्षेत्र सबै प्रकारका सार्वजनिक उडानका लागि खुल्ला भएको जानकारी दिएको थियो । दुवै देशको हितलाई ध्यानमा राखेर यो कदम चालिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ ।
गत १४ फेब्रुअरीमा जम्मु कश्मिरको पुलवामा भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीमाथि आतंकवादी हमला भएपछि दुई देशबीच शत्रुवत व्यवहार अझै उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
आक्रमणकारी जैश-ए-मोहम्मद समूहलाई पाकिस्तानको संरक्षण रहेको भन्दै भारतले पाकिस्तानी भूमिमा २६ फेब्रुअरीमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणबाट आतंकवादीको मुख्यालय ध्वस्त पारेको दावी भारतले गरे पनि पाकिस्तानले भने सो आक्रमणबाट जंगलका रुख बिरुवामा मात्र क्षति पुगेको बताउँदै आएको छ ।
सोही क्रममा पाकिस्तानले भारतीय एउटा वायु सेनालाई जमिनमा खसाल्नुका साथै त्यसका पाइलट अभिमन्यूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसलगत्तै भारत पछि हटेको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानले ती पाइलटलाई ससम्मान रिहा गरिदिएको थियो ।
सोही घटनादेखि पाकिस्तानले भारतीय विमानहरुका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गरेको घोषणा गरेको थियो ।
चीनको आर्थिक वृद्धि ३ वर्षयताकै सुस्त
मोदी सरकारका ३६ मन्त्री किन जाँदैछन् जम्मू-कश्मीर ?
ट्रम्प महाअभियोग प्रस्ताव पारित, राष्ट्रपतिको उम्मेदबार हुनबाट बञ्चित हुने !
अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध कम गर्ने सम्झौता
यस्ताछन् अमेरिका र चीनबीच सम्झौताका सर्तहरु
सन् २०२० भारतका लागि यसकारण बन्दैछ दु:खको वर्ष
निजी क्षेत्रसँग परामर्श गरेर कानुन बनाउँदा लागू गर्न सहज हुने
रोबोटलाई 'गुड मर्निङ्ग' भनाउने सीईओको यस्तो छ सपना
शेयर बजारमा पनि अब 'नयाँ युगको शुरुवात' !
गुहेश्वरी मर्चेण्टले आइतवारदेखि नगद लाभांश वितरण गर्ने
समता लघुवित्तको महिला सञ्चालकमा अनुपा ओझा
विनय परिवार सुसाइडकाे कारण अवैध कमोडीटी मार्केट
ससुराली हिँडेका लामिछाने परिवारसहित त्रिशुलीमा हाम्फाले
कर्जा विस्तारमा गरिएको कडाईका कारण बैंकमा पैसा थुप्रियो
खराब कर्जा लुकाउन मेगा बैंकको बेइमानी
हिमपातसँगै भारि बर्षा, तीन दिन यस्ताे रहने
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्दै ‘जुत्ता’ प्रहार, प्रहरीद्वारा धरपकड